Aries ee Zodiac qadiimiga ah - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Aries waa kooxda sideedaad ee Zodiac waxayna soo gabagabaynaysaa Unugga Zodiac iyagoo muujinaya natiijooyinka nooga soo baxay guusha Midka imanaya. Aries waa sawirka wan nool oo si fiican u leh madaxiisuna sareeyo. Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa March 21 iyo April 20 waxaad tahay Aries. Haddaba in this horoscope casriga ah reading of zodiac qadiimiga, aad raacdo talada horoscope ee Aries si aad u hesho jacayl, nasiib wacan, Xoolo, caafimaadka, iyo helitaanka aragti shakhsiyaddaada.
Laakiin maxay Aries ula jeeday markii hore?
Ka digtoonow! Kajawaabista tan waxay kuu furaysaa horoscope-kaaga habab aanad filayn, waxay kugu gali doontaa safar ka duwan markaa aad damacsanayd markaad kaliya hubinayso calaamada horoscope-kaaga
In Virgo waxaynu aragnay in Quraanka iyo Baybalkuba sheegeen in Eebbe ka dhigay xiddigaha Burjika oo ah calaamado laga soo bilaabo bilowgii aadanaha. Sheekadan qadiimiga ah ee laga soo bilaabo xiddigaha cutub kastaa wuxuu u ahaa dadka oo dhan. Sidaa darteed xitaa haddii aadan ahayn Aries ee dareenka horoscope casriga ah, sheekada faliga qadiimiga ah ee Aries waa mid mudan in la ogaado.
Xiddigaha Aries ee Xiddigaha
Waa kuwan xiddigaha sameeyay Aries. Ma ku arki kartaa wax u eg wan (lax ah) oo madaxiisu sareeyo sawirkan?
Aries Star Constellation ee cirka
Xataa isku xidhka xiddigaha ee Aries ee leh khadadka kama dhigayso wan cad. Haddaba sidee bay xiddigiyayaashii hore uga fikireen raam nool oo ka yimid xiddigahan?
Aries Constellation oo leh xiddigo ku xiran khadadka
Laakiin calaamadani waxay dib u noqotaa inta aan ognahay taariikhda aadanaha. Halkan waxaa ah zodiac ee Macbadka Dendera ee Masar, in ka badan 2000 oo sano, oo Aries ku wareegsan casaan.
Aries ee Macbadka Dendera ee Masaarida qadiimiga ah ee Zodiac
Hoos waxaa ku yaal sawirro dhaqameed oo Aries ah oo xiddigiyadu ay isticmaaleen ilaa hadda inta aan ognahay.
Waa maxay macnaha Ram macnaheedu
Waa maxay muhiimada aniga iyo adiga?
Sawirka Xiddigaha Aries Aries
Sawirka Zodiac Aries Classic
Macnaha asalka ah ee Aries
Iyadoo Capricorn arigii hore wuu dhintay si Kalluunku u noolaado. Laakiin Kooxda Pisces wali waxay haysteen kalluunkii. Waxaa weli jira addoonsiga qudhunka jirka iyo dhimashada. Waxaan ku noolnahay dhibaatooyin badan, waynu gabowno oo dhimannaa! Laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa sarakicidda jidhka. Lugta hore ee Aries oo ku fidsan kooxda Pisces waxay muujinaysaa sida tani u dhici doonto. Arin yaab leh ayaa ku dhacday ridii (Capricorn) oo geeriyootay. Injiilku wuxuu u sharaxay sidatan:
Oo carshiga badhtankiisii iyo afarta xayawaan iyo odayaasha badhtankoodii waxaan ku arkay Wan taagan oo ah sida mid la gowracay oo leh toddoba gees iyo toddoba indhood oo ah toddobada Ruux oo Ilaah, oo loo soo diray dunida oo dhan. 7 Oo isna intuu yimid ayuu kitaabkii ka qaatay kii carshigii ku fadhiyey gacantiisii midigtaa. 8 Oo markuu kitaabkii qaatay ayaa afartii xayawaan iyo afar iyo labaatankii odayba waxay ku dhaceen Wankii hortiisa iyagoo midkood waluba wato kataarad iyo fijaanno dahab ah oo foox ka buuxo oo ah baryadii quduusiinta. 9 Oo waxay ku gabyeen gabay cusub iyagoo leh, Adigu waxaad istaahishaa inaad kitaabka qaadato oo aad shaabadihiisa furto; waayo, waa lagu gowracay, oo waxaad Ilaah dhiiggaaga ugu soo iibisay dad ah qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyo quruun kasta, 10 oo waxaad iyagii ka dhigtay inay Ilaaheenna u ahaadaan boqortooyo iyo wadaaddo; oo iyana dhulka ayay wax ku xukumi doonaan.
11 Oo anna carshigii iyo xayawaanadii iyo odayaasha hareerahoodii waxaan ku arkay oo ka maqlay malaa’igo badan codkood, oo tiradooduna waxay ahayd toban kun oo meelood oo min toban kun ah, iyo kumaan kun; 12 oo waxay cod weyn ku lahaayeen, Istaahil waxaa ah Wankii la gowracay inuu helo xoog, iyo maal, iyo xigmad, iyo itaal, iyo ciso, iyo ammaan, iyo mahad. 13 Oo wax kasta oo la abuuray oo ku jira samada, iyo dhulka dushiisa, iyo dhulka hoostiisa, iyo badda gudaheeda, iyo waxyaalaha iyaga ku jira oo dhan, ayaa waxaan maqlay iyagoo leh, Kan carshiga ku fadhiya iyo Wanka ha u ahaadeen mahad, iyo ciso, iyo ammaan, iyo xoog, weligood iyo weligood. 14 Markaasaa afartii xayawaan waxay yidhaahdeen, Aamiin. Odayaashiina way dhaceen oo sujuudeen.
Muujintii 5: 6-14
Aries – Wanka Nool!
Warka yaabka leh, oo la qorsheeyay tan iyo bilowgii taariikhda aadanaha, waa in Wankii in kastoo la gowracay uu haddana soo noolaaday. Yuu ahaa wankii la gowracay? Nebi Yaxye, isagoo dib u fekeraya allabarigii Ibraahim, ayuu yiri Isa al Masih
Maalintii labaad Yooxanaa wuxuu arkay Ciise oo ku soo socda, oo wuxuu yidhi, Bal eega Wanka Ilaah ee dembiga dunida qaadaya.
Nabi Ciise Al-Masih NNKH ka sara kacay kuwii dhintay saddex maalmood ka dib iskutallaabtiisa. Afartan maalmood ka dib, markuu xertiisii ​​la joogay, injiilku wuxuu sheegay inuu samada u baxay. Sidaas darteed Wanku waa nool yahay oo jannada ku jiraa – sida Aries muujinayo.
Dabadeed isla muuqashadan Yooxanaa wuxuu arkay:
Oo bal eeg, waxyaalahaas ka dib waxaan arkay dad faro badan, oo aan ninna tirin karin, oo lagala soo baxay quruun kasta, iyo qabiil kasta, iyo dad kasta, iyo af kasta, oo taagan carshiga hortiisa iyo Wanka hortiisa, iyagoo qaba khamiisyo cadcad, gacmahana ku haysta caleemo timireed. 10 Oo iyana waxay ku dhawaaqeen cod weyn, iyagoo leh, Badbaado waxaa leh Ilaahayaga carshiga ku fadhiya iyo Wanka.
Kuwani waa dadka faraha badan, oo lagu asteeyay kalluunka kalluunka, kuwaas oo u yimid Wanka. Laakiin hadda xadhiga qudhunka iyo dhimashada waa la jebiyey. Aries ayaa jebisay xadhkaha xajinaya kalluunka Kalluunka. Waxay heleen buuxnaanta badbaadada iyo nolosha weligeed ah.
Aries Horoscope ee Qoraallada
‘Horoscope’ waxay ku salaysan tahay erayga Giriigga ah ‘Horo’ (saac) iyo qoraallada nebigu waxay calaamadiyaan waxyaabo badan oo muhiim ah saacadood. WWaxaan qoraallada ku dhex akhrinayay Virgo-ga muhiimka ah ilaa Pisces ‘saacadaha’ qoraallada. Laakiin waa ereyga kale ee Giriigga ee Horoscope – skopus (σκοπός) – kaas oo soo saara akhrinta Aries. Skopus hab si loo eego, ka fikir or fiirsan. Aries wuxuu sawiraa Wanka daa’imka ah ee Ilaah sidaas darteed ma siinayo wakhti go’an oo diiradda lagu saaro. Taa beddelkeeda, waxaa nalagu booriyay inaan tixgelinno Ram laftiisa.
Idinku waxba ha ku samaynina iskala-qaybqaybin iyo faan bilaash ah, laakiinse wax walba ku sameeya is-hoosaysiin, idinkoo midkiinba midka kale ku tirinayo inuu ka kale isaga ka wanaagsan yahay. 4 Midkiin waluba yuusan fiiro u lahaan waxyaalihiisa, laakiinse midkiin waluba fiiro ha u lahaado waxyaalaha kuwa kale.5 Fikirkaas oo Ciise Masiix ku jiray, idinkana ha idinku jiro. 6 Isagu wuxuu lahaa suuradda Ilaah, oo inuu Ilaah la mid ahaado kuma uu tirin in taasu tahay boobis, 7 laakiinse wuu ismadhiyey, oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis, oo wuxuu noqday mid dad u eg, 8 oo markuu nin u ekaaday, ayuu is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto, xataa inuu iskutallaabta ku dhinto. 9 Haddaba sidaas daraaddeed Ilaah isaga aad buu u sarraysiiyey, oo wuxuu isaga siiyey magaca magac kasta ka sarreeya; 10 in jilib kastoo ah waxyaalaha samada ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaaba, ay magaca Ciise u wada sujuudaan, 11 iyo in carrab kastaaba qirto in Ciise Masiix yahay Rabbiga in Ilaaha Aabbaha ah lagu ammaano.
Filiboy 2:3-11 )
Ma jirto saacad xadidaysa Aries the Ram. Laakiin Ram wuxuu soo maray heerar kala duwan oo ammaan ah. Waxaan marka hore ku aragnaa dabeecadda (ama qaabka) Ilaah. Wuxuu qorsheeyay xataa tan iyo bilowgii inuu addoon noqdo isagoo binu-aadmi ah oo dhimanaya. Virgo ku dhawaaqay soo degitaankan ‘u ekaanshaha aadanaha’ iyo Capricorn wuxuu muujiyay addeecidiisa dhimashada. Laakiin dhimashadu ma ahayn dhammaadka – way hayn kari wayday isaga oo hadda Ram wuxuu ku sarreeyaa jannada, nool iyo mas’uuliyadda. Waxay ka timid awooddan sare iyo awoodda Ram uu fuliyo cutubka ugu dambeeya ee Zodiac, oo ka bilaabma Taurus. Mar dambe addoonkii, wuxuu isu diyaarinayaa inuu yimaado qiyaamaha si uu uga adkaado cadowgiisa, sida Sagittarius sheekadii Zodiac ee hore ayaa saadaalisay.
Akhriska Horoscope-kaaga Aries
Adiga iyo aniga waxaan u adeegsan karnaa akhrinta horoscope Aries sidan:
Aries waxay ku dhawaaqday in iftiinka subaxdu uu yimaado habeenka madow ka dib. Noloshu waxay leedahay hab ay kuugu soo jiidato habeen madow. Waxa laga yaabaa in lagugu daneeyo in aad iska tanaasusho, iska dayso ama aad dejiso wax ka yar waxa laguu sameeyay. Si aad u heshid adkeysi aad ku sii wadato waxaad u baahan tahay inaad fiiriso duruufahaaga iyo xaaladaada. Waxaad u baahan tahay inaad aragto aayahaaga ugu dambeeya. Waxaad sidaas ku samaynaysaa adiga oo ka saaraya Aries. Haddii aad ka tirsan tahay Aries waxaad fuuli doontaa jaakadihiisa oo isna wuxuu joogaa meesha ugu sarreysa oo halkaas ayuu ku qaadan doonaa isaga. Waayo, haddii, intaad cadowga Ilaah ahayd, uu xidhiidhkiinnii isaga ku soo noqday allabarigii Capricorn, intee in ka badan ayaad hadda la jaanqaadaysaan isaga, miyaad ku badbaadi doontaan nolosha Aries? Kaliya waa inaad raacdo jidkiisa, jidkiisuna hoos buu u dhacay ka hor inta uusan kor u qaadin – sidaas oo kale adigana waa inaad raacdaa.
Sidee loo sii wadaa? Ku faraxsanow nolosha Aries had iyo jeer. Waxaan mar kale ku odhan doonaa: Farxa! Dabeecadnimadaadu ha ka muuqato dhammaan cilaaqaadkaaga. Aries waa dhow. Waxba ha ka welwelina, laakiin xaalad kasta, duco iyo duco, iyo mahadnaq, baryadiinna Ilaah ugu gee. Oo nabadda Ilaah oo waxgarashada ka sii badan ayaa qalbiyadiinna iyo maskaxdiinna ku dhawri doonta Raam. Ugu dambaysta, wax alla wixii run ah, iyo wax kasta oo sharaf leh, iyo wax kasta oo xaq ah, iyo wax alla wixii daahir ah, iyo wax kasta oo la jecel yahay, iyo wax alla wixii la mahadiyo, haddii ay wax wanaagsan yihiin ama ay ammaan mudan yihiin, ka fiirsada waxyaalahan oo kale.
Soo noqoshada Wanka
Tani waxay xireysaa cutubka labaad ee sheekadii zodiac ee qadiimiga ah taas oo diiradda saareysa faa’iidooyinka la siiyo kuwa hela midhaha guusha Isa al Masih (Wanka). Maxaa diidaya hela hadiyadiisa nolosha?
Cutubka ugu dambeeya, cutubyada 9-12 ee Sheekada Zodiac, waxay diiradda saaraan waxa dhacaya marka Aries the Ram soo laabto – sida ayuu balan qaaday. Tan waxaa lagu sheegay isla muuqalka Wanka markuu Yooxanaa arkay:
Burjigii hore ayaa tan lagu muujiyay Taurus. Eeg Virgo si loo bilaabo Sheekada Zodiac. Erayada qoran ee u dhigma Aries eeg:
9 Oo bal eeg, waxyaalahaas ka dib waxaan arkay dad faro badan, oo aan ninna tirin karin, oo lagala soo baxay quruun kasta, iyo qabiil kasta, iyo dad kasta, iyo af kasta, oo taagan carshiga hortiisa iyo Wanka hortiisa, iyagoo qaba khamiisyo cadcad, gacmahana ku haysta caleemo timireed. 10 Oo iyana waxay ku dhawaaqeen cod weyn, iyagoo leh, Badbaado waxaa leh Ilaahayaga carshiga ku fadhiya iyo Wanka.
3 Idinku waxba ha ku samaynina iskala-qaybqaybin iyo faan bilaash ah, laakiinse wax walba ku sameeya is-hoosaysiin, idinkoo midkiinba midka kale ku tirinayo inuu ka kale isaga ka wanaagsan yahay. 4 Midkiin waluba yuusan fiiro u lahaan waxyaalihiisa, laakiinse midkiin waluba fiiro ha u lahaado waxyaalaha kuwa kale.5 Fikirkaas oo Ciise Masiix ku jiray, idinkana ha idinku jiro. 6 Isagu wuxuu lahaa suuradda Ilaah, oo inuu Ilaah la mid ahaado kuma uu tirin in taasu tahay boobis, 7 laakiinse wuu ismadhiyey, oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis, oo wuxuu noqday mid dad u eg, 8 oo markuu nin u ekaaday, ayuu is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto, xataa inuu iskutallaabta ku dhinto. 9 Haddaba sidaas daraaddeed Ilaah isaga aad buu u sarraysiiyey, oo wuxuu isaga siiyey magaca magac kasta ka sarreeya; 10 in jilib kastoo ah waxyaalaha samada ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaaba, ay magaca Ciise u wada sujuudaan, 11 iyo in carrab kastaaba qirto in Ciise Masiix yahay Rabbiga in Ilaaha Aabbaha ah lagu ammaano. ()
Waxay u dhawaaqeen buurihii iyo dhagaxyadii, oo waxay ku yidhaahdeen, nagu soo dhaca, oo naga qariya kan carshiga ku fadhiya wejigiisa iyo cadhada Rabbiga. Wanka!
Maalintii dambe Yooxanaa wuxuu arkay Ciise oo ku soo socda, oo wuxuu yidhi, Bal eega; Wanka IlaahBal yaa dembiga dunida qaada!
9 Waxyaalahaas dabadeed wax baan fiiriyey, oo waxaa hortayda joogay dad badan oo aan ninna tirin karin, oo ka yimid quruun kasta, iyo qabiil kasta, iyo dad kasta iyo af kasta, oo waxay hor taagnaayeen carshiga iyo Wanka hortiisa. Waxay xidhnaayeen khamiisyo cadcad, waxayna gacmaha ku siteen laamo timireed. 10 Oo waxay ku qayliyeen cod weyn.Badbaadada waxaa iska leh Ilaahayo,
yaa carshiga ku fadhiya.iyo Wanka.
Waxba ha samaynina damac aan waxba tarayn ama kibir micne lahayn. Laakiin is-hoosaysiinta ku qiimee kuwa kale naftiinna. 4 ma raadinaya (Skopus) dantaada, laakiin mid kasta oo idinka mid ah danta kuwa kale.
5 Xidhiidhkiinna midkiinba midka kale ku leeyahay, ku fikira sida Ciise Masiix.
6 Yaa, isagoo ah Ilaah dabiicaddiisa,
ma uusan u qaadan in Ilaah la sinnaado wax uu isagu ku faa’iidaysto;
7 Balse isagu waxba iskama uu dhigin
adoo qaadanaya dabeecadda addoonta,
laga sameeyay sida dadka.
8 Oo muuqashadiisa laga helay sidii nin.
wuu is-hoosaysiiyey adoo addeeca ilaa dhimashada – xataa dhimashada iskutallaabta dusheeda!
9 Sidaas daraaddeed Ilaah baa isaga u sarraysiiyey meel sare oo waxay u bixiyeen magaca ka sarreeya magac kasta.
10 in jilib waluba magaca Ciise ku sujuudo. cirka iyo dhulka iyo dhulka hoostiisa.
11 Carrab waluba wuxuu qirayaa in Ciise Masiix yahay Rabbiga. ammaanta Ilaaha Aabbaha ah.
Burjigii hore ayaa tan lagu muujiyay Taurus. Eeg Virgo si loo bilaabo Sheekada Zodiac.
Erayada qoran ee u dhigma Aries eeg:
Saxiixa 3aad ee Ibraahim – Allabaryo
Isa al Masih wuxuu ku dhawaaqay Jihaadka
Miraha ugu horreeya ee qiyaame
Fahamka & Qaadashada Hibada Nolosha